MUUQAALO – Shabakadda Wararka Amiirnuur
Video : Alshabaab oo ka digay ka qeybgalka Doorashooyinka Kenya.
Mu’asasada AlKataa’ib, garabka warbaahineed ee Xarakada Al-Shabaab ayaa wareysi gaar ah oo ku saabsan doorashooyinka guud ee la filayo in ay ka dhacaan dalka Kenya la yeelatay Sheykh Axmed Iimaan Cali oo ka mid ah mas’uuliyiinta Xarakada. Wareysigan oo ah qeybtii koowaad ayaa Sheykh Axmed lagu weydiiyey su’aallo dhowr ah […]
Daawo : Meliteriga Urdun oo faafiyay Video muujinaya Saraakiil Mareyakn ah oo sannad ka hor lagu dilay dalkaasi.
Ciidamada Meliteriga ee dalka Urdun ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday Muuqaal ay duubtay Kaamiro ku dhaganeyd albaabka laga galo Saldhigga Cirka ee Boqor Feysal oo kuyaalla Mandiqadda Al-Jafar, halkaas oo sannadkii hore uu ka dhacay weerar uu Askari Urdun u dhashay uu ku dilay Seddax tababare oo Mareykan […]
Kadib 270 maalmood oo ay kasoo wareegatay markii uu billowday dagaalkii xoogganaa ee lagu qaaday magaalada Muusil ee Waqooyiga dalka Ciraaq, waxay dood ka taagan tahay inta la eg tahay tirada dadka rayidka ah ee dagaalkaasi ku dhintay. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka Ciraaq Hooshyaar Zibaari ayaa sheegay […]
Al-Kataib oo Filim kasoo saartay Khasaaraha Kenya ay kala kulantay Duullaankii Soomaaliya. [ Video]
Mu’asasada Al-Kataa’ib, garabka warbaahineed ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa filim Infographic ah ka soo saartay qasaaraha Military, midka dhaqaale iyo midka nafeed ee Kenya ay kala kulantay Duulaankii ay ku soo qaaday Soomaaliya sanadkii 2011-kii. Filimkan oo la daawan karo muddo ka badan 35 daqiiqo ayaa ku baxaya luuqadaha English […]
Daawada “Cafinta” iyo Sheekh Yaxya Ibraaahim.